Controversy surrounds Zimbabwe poll Jump to media player Early voting is already under way as Zimbabweans chose who will be their next president, following years of governance by an uneasy coalition.
Tsvangirai starts election campaign Jump to media player Zimbabwe's Prime Minister Morgan Tsvangirai has launched his third campaign to unseat the veteran President Robert Mugabe.
Zimbabwe election 'seriously compromised'
Observers in Zimbabwe have questioned the credibility of Wednesday's elections with claims that up to a million people were prevented from voting.
With the result still to be declared, President Robert Mugabe's Zanu-PF party said it had won an emphatic victory.
The rival candidate, Morgan Tsvangirai, said intimidation and ballot-rigging meant the election was invalid
Irene Peterson from the Zimbabwe Election Support Network (ZESN) said the Electoral Commission has serious issues to address "so that people's minds can be put at ease."
Go to next video: Zimbabwe poll 'farce,' says Tsvangirai